जसपा द्वारा जनकपुरमा प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन ,मधेशमा मधेशी जनता तातिदै ! | अपन जनकपुर
जसपा द्वारा जनकपुरमा प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन ,मधेशमा मधेशी जनता तातिदै !
विपिन कुमार यादव, ९ असार । नागरिकता ऐन २०६३ को संसोधन विद्येयक मंगलवार प्रतिनिधीसभामा प्रस्तुत भइरहँदा तराई मधेशको सडकमा भने व्यापक विरोध भएको छ । जनता समाजवादी पार्टीले मंगलवार विभिन्न समयमा प्रदेश २ को आठ वटै जिल्लामा विद्येयक विरुद्व प्रदर्शन गर्दै नारावाजी मात्र गरेन प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको पुत्ला समेत दहन गरेको छ ।
जनकपुरधामको जनकचौकमा जसपाका सांसद, नेता तथा कार्यक्रताहरु सडकमा बसेर अवरोध गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन । साथैै उनीहरुले सरकार विरोधी नारावाजी समेत गरेका थिए । पार्टीको नेता तथा कार्यकर्ताले जनकपुरमा नागरिकता विधेयकको प्रतिलिपी र प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गरिएको छ । मंगलबार भानुचौकमा जम्मा हुदै जसपाको नेताकार्यकर्ताले सत्तारूढ नेकपाले गरेको नागरिकता विधेयक सम्बन्धि निर्णय प्रति बिरोध जनाउदै प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गरेको छ् ।
विवाह गरेर नेपाल आउने विदेशी महिलालाई सात वर्ष पछि मात्र नागरिकता दिने प्रावधानको तराई मधेशका नेकपाकै नेताहरुले समेत विरोध गर्न थालेका छन् ।
विद्येयकको विरोधमा दैनिक प्रदर्शन तथा विरोधका कार्यक्रमहरु बाक्लिदै गएका छन् । प्रदर्शनमा जसपाका अगुवा नेताकार्यकर्ता सहित जिल्लाका नेता कार्यक्रताहरुको सहभागिता थियो ।